समुदाय-प्रहरी साझेदारी मार्फत चम्किदै नेपाल प्रहरी ! | CNNepal
समुदाय-प्रहरी साझेदारी मार्फत चम्किदै नेपाल प्रहरी !
काठमाडौं, २३ भदौ । राजधानी काठमाडौं स्थित चन्द्रगिरी नगरपालिका – १५ तीनथाना गढी डाँडामा हिजो शनिबार बिहानै केहि नेपाल प्रहरी कर्मचारीहरुको उपस्थिती भयो ।
आक्कल झुक्कल सुरक्षाकर्मी देख्न पाइने स्थानमा पोशाक सहितका प्रहरीको उपस्थितीले स्थानीयहरु चनाखो भए ।
यस्तै चहल पहल बढेको छ मुलुक भर स्थानीयदेखि केन्द्र सम्म नेपाल प्रहरीको साझेदारी अभियान ।
प्रहरीले पछिल्लो समय जनता अर्थात आमनागरिकसँग हिमचिम बढाउने गजब तरिका अघि सारेको छ । जसलाई सामुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम नामकरण दिइएको छ ।
उहाँले नेतृत्व समालेसँगै आम नागरिकमा ल्याइएको पहिलो महत्वपुर्ण कार्यक्रमले दिर्घकालिन रुपमा फड्को मार्ने छनक नछिपाईकन देखिएको छ । जसले साख:को ‘कद’ उचाल्ने बनाएको छ ।
स्थानीय तहमा निहित सामाजिक न्याय, सुरक्षा, मेलमिलाप, सामुदायिक शिक्षा र जनचेतनाको दायित्व तथा सामुदायिक साझेदारीको माध्यम समेतबाट अपराध नियन्त्रण र रोकथाम गर्ने प्रहरीको मूलभूत दायित्वको बीचमा सामञ्जस्यता कायम गर्दै नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहबीच समझदारी कायम गरी साझा संयन्त्रहरुको माध्यमद्वारा सामुदायिक सुरक्षालाई अभिवृद्धि गर्न ‘समुदाय-प्रहरी साझेदारी ’ को अवधारणा अवलम्बन गरि अघि बढाइएको हो ।
२०७५ कार्तिक ११ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र आइजीपी सर्बेन्द्र खनालको उपस्थितीमा समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको थियो ।
त्यसैले पनि मुलुकभर देखिएको प्रभावकारी र सक्रियतालाई मध्येनजर गर्ने हो भने खनालले संगठन भित्र आफ्नो कार्यकालमा एउटा महत्वपुर्ण इट्टा थपेको सम्मान इतिहासले गर्नेछ । र गर्वका साथ फड्को मार्ने छ ।
हाल सम्म महानगरहरु सहित ७ प्रदेशका जिल्ला समिति, पालिका समिति, वडा समिति ,टोल समिति, विद्यालय समिति गरि जम्मा २२१८४ समिति गठन भएका छन् ।
प्रहरीसँग १ दिन, Anti Ragging Capaigm सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमले तिब्रता पाएको छ ।
प्रहरीले स्थानीय तह, समुदाय, सामाजिक सङ्घसंस्था तथा विद्यालयसँगको साझेदारीमा उक्त अभियान हरेक तह र तप्काका प्रहरीहरुलाई भ्याइनभ्याई भएको छ ।
हुन पनि उच्च समान, शान्ति र स्थायित्वका लागि विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा ‘समुदाय– प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम दु्तगतिमा बढाएको देखिन्छ ।
प्रहरीले समेत समाजलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा छलांग मारेको छ । संगठनको जिम्मा लिएका नेतृत्वकर्तामा बोली,बचन समेत फेरिएका छन् । भाषामा शिष्टता मौलाएको छ । सभ्यता बढेको छ ।
ब्यवहार र आचारणमा परिवर्तन देखिएको छ । सोझै नागरिकको सम्बन्ध कार्यलय प्रमुख हुँदै माथिल्लो तह सम्म बढेको छ ।
जनचेतनाको गुणस्तरियाता बृद्धीका कारण प्रहरीलाई समेत अनैतिक क्रियाकलाप र आर्थिक अनियमिताका मामिलामा थप जिम्मेवारीपन बढाएको छ ।
सर्तक हुने अवसर पनि जुटाएको छ । नागरिकमा पनि हामी विनाबर्दीका प्रहरी हौं । प्रहरी पनि नागरिक हुन् भन्ने अपनत्व बढ्दै गएको छ ।
समाजमा हुने हत्या, हिंसा, छुवाछुतलाई छिचोल्न यस्ता कार्यक्रमले ठुलो साथ दिएको छ । बर्णहीनता र रंग विभेदका लागि कुनै असर नरहोस् ।
अहिलेको डिजिटल युगको प्रारम्भमा यस्ता सक्रियताले मानव जिवन अझ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढ्न प्रेरणा मिलोस् । सो अभियानले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने सरकारी लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोगी बन्ने प्रहरी अधिकारीहरुको विश्वास छ ।
गृह प्रशासन सुधार योजना, कानूनी प्रावधान र गृह मन्त्रालयले ल्याएको ८२ बुँदे अवधारणालाई समेत आत्मसात् गरी उक्त अवधारणा प्रहरीले अघि सारेको हो । उक्त कार्यक्रमले महान कार्यसिद्धि पाओस् यहि शुभकामना छ ।
Previous articleमानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध बलम्वु प्रहरीले निकाल्यौ बृहत ¥याली
Next articleघर लुटपाट गर्ने योजना बुन्दाबुन्दै पक्राउ